Assassin's Creed Kuisa Nongedzo paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Pachiitiko ichi Ndakafunga kuisa imwe yemitambo yangu yandaifarira kukwanisa kunakirwa nazvo kwechinguva, ndosaka kubva pane zvandino govana pamwe newbies gwara rakapusa rekuti unganyatsoisa sei Assassin's Creed paLinux.
Ini ndanakidzwa nemaawa mazhinji ekutamba nemusoro uyu uye kwemakore ndatevera iyo franchise yemutambo, havazondibvumire kunyepa, asi chikamu chekutanga chaive chimwe cheakanakisa akasiya anopfuura mumwe achida zvimwe.
Tichaenderera mberi nekugadzira zvigadziriso zvakafanira kuisa mutambo wedu paLinux.
Iva ne PlayOnLinux kana Waini yakaiswa, zvichikundikana izvo.
Ita kuti vatyairi vemakadhi ako emifananidzo vaiswe.
Kana iwe uine zita rako pane Steam, iwe uchafanirwa chete kuita iyo yevatengi yekumisikidza uye kurodha pasi mutambo seimwe yekuwedzera
Kuisa Assassin's Creed paLinux
Si wafunga kushandisa waini iwe unofanirwa kusvetukira kuchikamu uko kwatino gadzira maraibhurari zvakafanira kuitiswa chaiko kwemutambo, kweizvi iwe uchazendamira pa winecfg.
Kune avo vakasarudza kushandisa PlayOnLinux isu tinofanirwa kuvhura uye Isu tinoenda kumenyu> zvishandiso> shanduro dzeWine.
Pano fafitera rinovhura, kunyangwe iwe kana usingashandise 64-bit processor haina basa, isu tinoshandisa 32-bit vhezheni yewaini. Pano ivo vanodhawunirodha yazvino nyaya mune ino yakagadzikana iri 3.0.
Iye zvino Tinomirira kuti itorwe pamwe nemapakeji ayo anodiwa.
Waita kurodha pasi tinodzokera ku PlayOnLinux menyu uye ikozvino tichaenda kunoti kwazvinoti "Isa chirongwa"
Kutengesa kuchavhurwa uye muchikamu chezasi chekuruboshwe tinobaya panoti "Isa chirongwa chisina kunyorwa"
Nhanho inotevera yavanotibvunza ndeyekutumidza muchina chaiwo, vanogona kuzviita sezvavanoda kana kungoisa zita remutambo. Tinopa mune inotevera.
Iwindo rinotevera rinotiratidza zvitatu, izvo zvatinozomaka.
Shandisa imwe vhezheni yewaini
Isu tinopa mune inotevera uye pano Izvo zvinotikumbira isu kusarudza yedu vhezheni yewaini, tinosarudza iyo yatakanga tambotora pasi.
Iye zvino bata zvigadziriso zveWine.
MuApplications tab, sarudza iyo Windows vhezheni ku "Windows 7"
Iye zvino pakubata sarudza maraibhurari kuti tikwanise kumhanya mutambo.
Maraibhurari ndeaya anotevera:
Finalmente zvichatikumbira kuti tiwane iyo yekuisa mutamboPano kana iwe uri kushandisa Steam, sarudza iyo inosimudza kumagumo, pinda account yako uye utore mutambo.
Kana iwe ukashandisa chimiro chemuviri isa diski yako uye sarudza iyo yekumisikidza uye uteedzere nhanho dzeanosimudza achipa padhuze nezvese uye mirira kuti ipedze.
Pakupera kweanomisikidza, ikozvino tichagadzira iyo pfupi nzira yemutambo, yakakurudzirwa ndeye kushandisa Directx 9 kana 10 uye isu tinoisa zita kune yakananga kuwana.
Mushure mekumisikidzwa kwemutambo, tinodzokera kuwindo guru rePlayOnLinux isu tinosarudza mutambo uye ikozvino mune sarudzo idzo PlayOnLinux inotipa tinodzvanya kwazvinoti gadzirisa.
Iwindo rinovhura uye mukati maro, isu tinozvimisikidza isu mukati meKuratidzira tebhu uye mune sarudzo dzarinotiratidza mu "Vhidhiyo ndangariro saizi" Isu tinosarudza huwandu hune kadhi redu revhidhiyo kana iri 2 GB isu tinosarudza 2048, kana iri 1GB tinongoisa 1024.
Isu tinovhara hwindo uye ikozvino tinogona kuenderera kumhanya mutambo wedu.
Solo sarudza mutambo uye tinya pa "Mhanya", neiyi ichatanga, kana tazviita neSteam inomhanya uye isu tinongofanirwa kutanga mutambo kubva kuSteam.
Kana uine matambudziko nechisarudzo, tinodzokera kuchikamu che "Kugadziridza" uye muTebhu tebhu, mukumisikidza Waini, hwindo iro rakambogadziridza Windows vhezheni richavhurwa.
Mune iyo Graphics tebhu isu tinoshandisa dzese sarudzo uye mukugadzirisa sarudza 1024 × 768.
Izvo zvinongo sara kuti iwe unakirwe nemutambo, ini ndinongovimba kuti uyu mudiki dhairekitori akakushandira iwe, chero mibvunzo kana makomenti akagamuchirwa mubhokisi remashoko.
Pasina imwezve ado, zvinongosara kuti iwe unakirwe nemutambo, zvakanyanya seni, pasina zvimwe ado Ndinovimba uyu mudiki dhairekitori akakushandira, chero mibvunzo kana makomenti akagamuchirwa mubhokisi remashoko.
Ndinovimba ndinogona kugovera mamwe madhairekitori.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Assassin's Creed Kuisa Nongedzo paLinux